Bolivia: Tanana Ratsy Fihetsiky ny Ben’ny Tanànan’i Santa Cruz · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2012 10:38 GMT
Tsy vao voalohany ny Ben'ny tanànan'i Santa Cruz, Percy Fernández no tratra tamin'ny lahatsary amin'ny fitondratena ratsy ataony. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tamin'ny 29 Martsa 2012, nandritra ny hetsika ho an'ny daholobe, izay nahitana azy niaraka tamin'ilay mpikambana mpanolotsaina monisipaly Desirée Bravo. Raha nitsangana handray fitenenana ho an'ireo mpanatrika marobe i Bravo, tazana tsara amin'ny lahatsary ny tanan'i Fernández mikitika ny fitombenan'i Bravo, ary hita tamin'izany fa niezaka nanala ny tanany i Bravo, izay mahatonga ny maro hihevitra fa nohararaotin'i Fernández ara-nofo ilay mpikambana mpanolo-tsaina. Ankoatra izany fitondratena hafahafa izany, hita nanoroka sy nisafosafo ny tanan'ilay mpanolotsaina koa i Fernández, no sady mihomehy amin'ireo olona mipetraka eo akaikiny.
Ny sasany milaza fa karazana fitondratena hafahafa no ataon'i Fernández amin'ireo vehivavy ao amina sampandraharaham-panjakana tahaka izao. Lahatsary hafa tamin'ny taona 2010 ohatra mampiseho azy manoroka an-katerena elabe eo amin'ny molotr‘ilay mpiasam-panjakana tsy fantatra anarana nandritra ny fanaraha-maso ilay tetikasa vaovao momba ny asa vaventy ao an-tanàna.
Noho izany tranga izany, tafintohina ireo mpamahana bolongana Boliviana ary manontany ny antony mbola hisian'ny toe-javatra tahaka izao sy ny mbola hitohizan'izany indray. Javier Badani (@jbadani) nihevitra fa henatra ho an'ny firenena i Fernández ary nanontany koa izy hoe nahoana ny “Cruceños (mponina ao Santa Cruz) no mamela malalaka ity manampahefana tsy mendrika ity hanao fihetsika tahaka izao?“.
Na dia izany aza, manontany koa ny sasany hoe nahoana no tsy nimenomenona tamin'i Fernández i Bravo na nanakana ity ben'ny tanàna tsy hikitikitika azy. Somary sorena noho ny fitondratena ataon'ny mpanao politika amin'ny vehivavy ilay mpamahana bolongana manoratra amin'ny anarany Inés Punto G ao amin'ny bilaogy La Mala Palabra, ary mieritreritra fa mety narovan'i Bravo koa izao karazana fitondrantena izao:
Ataon'olona fihomehezana noho ny adalan'ny hafa isika, raha mikitika ny fitombenan'i Desirée izy, navelany ihany koa i Percysconi ( Berlusconi vaovao [Praiministra Italiana teo aloha] ao Santa Cruz) nanoroka ny tanany, ataon'ny lehilahy kilalao isika, ka hoy izy ireo hoe, “raha avelan'ny vehivavy izy ireo.,” tena fanesoana kosa izany. Tokony novelesin'i Desirée izy! Desirée ô, aza simbanao ny androko tahaka ny nataonao androany, ho taratry ny fahamendrehana, tokony nametra-pialana ianao na naka ilay lahiantitra ho eo akaikinao hihinana maloto.
Mpisera Twitter @arbork nanoratra hoe:
Ny fahanginan'i Desirée manoloana ny fihetsiky Percy no tena manafintohina ahy mafy noho ny fahanginana tsikombakomba ataon'ny [vondrom-behivavy] Mujeres Creando (Vehivavy nanangana ny vondrona) sy ny fikambanam-behivavy ao Bolivia.
Mpanao gazety no sady mpisera Twitter Mery Vaca (@meryvaca) namaly ireo tsikera sasany namely an'i Bravo:
Hitako fa nampijalian'izy ireo fotsiny i Desirée (eny, tokony namelaka tehamaina azy i Desirée), saingy i Percy no tena afa-baraka. Jereo tsara izany.
Mpikambana ao amin'ny Antenimiera nipetraka teo akaiky teo nilaza fa saiky hamafa ny patalohan'i Bravo nisy maloto fotsiny i Fernández satria nipetraka teo ambonin'ny seza maloto izy. Na dia izany aza, fotoana fohy taty aoriana, nanao fanambarana ampahibemaso i Fernández ho fialan-tsiny noho ny fitondratenany fa tsy tao anatiny mihitsy izany hanamavo na iza na iza izany. Nilaza ihany koa izy fa noho ny elanelan-taona eo amin'ny 20 taona eo, toy ny rain'i Bravo i Fernández, namaly izany avy hatrany i Ximena Flores (@ximefloresss):
Nilaza i Percy fa “tahaka ny zanany vavy” i Desiree, ” kanefa tsy mba tsaroako nanana fitondratena tahaka izany ny raiko amin'ny fihetsiky ny tanana, tsy mitombina ny fialan-tsiny nataony [Fernandez] tahaka ny tsy maha-mety ny fitondratena nataony